Kuvandudza SEO Yako Nehuwandu: Mazano kubva kuSemalt
Nharaunda yeSOO haisati yaita nekugadzirisa nzvimbo yako pachako. Inosanganisirawo kuchengetahukama hune hukama nehutano hwako hwekuInternet uye kuva nehutano hwakasimba kuburikidza newebsite yako uye nhepfenyuro. Zvemagariro evanhu vanekuva chikwata chakanaka chekukurukurirana nevatengi vako.
Muna 2009, Google yakatanga kushanda pakubatanidza nhepfenyuro yehupfumi muhutsva hwekutsvagaalgorithm. Izvi zvinoreva kuti kubatanidza nzvimbo yako yehupenyu nemasangano ehupfumi sezvakaita Facebook, Twitter uye Instagram zvichaita kuti hutano hukuru huvepouye kushanyira nzvimbo. Somugumisiro, nhare yako ichave yakarongedzwa yakakwirira - девственная плева ее расположение.
Kumabhizimisi emunharaunda, zvose zvinosanganisira maawa ekushanda, zuva, uye mutengoinofanira kuva yakasviba. Mutengi weKuteresi Achibudirira we Semalt ,Frank Abagnale anopa pfungwa dzichakubatsira iwe kuvandudza webhusaiti yako nehuwandu hwemagariro evanhu kuitira kuti usvike kubatanidzwa kwakakwirira uye kuisa
1. Wedzera Blog pane yako Website
Bhuku rinonyanya kukosha kune webhusaiti. Shandisa iyo kuisa ruzivo rwezvino pamusorozvishandiso zvako nemashandiro, vatengi vako uye nharaunda yako. Kuita kuti blog ibatanidzwe, kuongorora pfungwa dzinotevera.
Wedzera Mifananidzo uye Nhau dzeVatengesi Vakavimbika Kune Bhizimisi Renyu
Bvunza vatengi pamusoro pezviitiko zvavo uye mazano ekuvandudza mararamiro enyu.Mushure meizvi, shingaira kubvunzurudza nekubvunzurudza nemifananidzo pane bhurogi rako. Wana mvumo yako usati washambadza. Nyora nyaya yacho pane zvakasiyana-siyana zvekugarisanamapuratifomu uye kupa hubatanidza kuhofisi yako yepa blog. Iyi inzira yakanaka yekuita nevatengi vako. Vachafunga kuti vanokoshesa.
Post Pictures dzeBhizimisi Rako Panguva Yakasiyana
Nyora zvifananidzo nguva nenguva uye tsanangura.nhepfenyuro mapurisa uyewo kupa hutano kudzokera kunzvimbo yako. Shandisa mifananidzo kuti uvandudze Google My Bhizinesi, Yahoo nzvimbo uye Bing Places photos.
Isa chimwe chigadzirwa kana kupinda
Kuita izvi nguva dzose kunobatsira kuchengetedza vatengi vako kugadzirisa nezvehutano hwako.
Nyora Nyaya Inotyisa Nyaya Yacho Yakafanana Nebhizimisi Rako
Ngatitaurire kuti iwe wakachena yakaoma, mushure mekushongedza zvakasviba iwe wawageza. Nyoraiyo nyaya yekuti chipfeko icho chakasvibiswa sei nezvimwe zvakadaro. Bhizimisi haigone kupotsa 'nhau inotyisa'. Tsvaga imwe uye zvinyorwa pamusoro payo pa blog yako uyeuye ugozvigovera pane zvemagariro evanhu.
2. Unganidza nevanhu vane simba kubva kumunharaunda yenyu
Shandisa mapeji ako evanhu vemagariro evanhu kuti ubatane nevanhu vakakurumbira sevanokurumbira munharaunda yenyu.Shandisai navo kuburikidza nekugovana zvinyorwa zvavo nezvimwewo. Unhu hwamunharaunda hunogona kubatsira kutengesa chigadzirwa chako nemabasa. Pavanopindurakumashoko ako nezvimwe, vamwe vanhu vanogona kuzviona sechibvumirano.
3. Ita Viral Posts
Paunenge uumba chimwe chinhu chinoenda kuhutachiona hwehupfumi, vanhu vazhinji vanozonzwa vachifariramune bhizinesi rako kana kambani. Vanhu vachatanga kutsvaga bhizinesi renyu uye injini dzekutsvaga dzichazviona semugumisiro.
4. Unganidza neNyu Yenyu Yenharaunda
Shandisa zviitiko zvemunharaunda kuti ubatane nemunharaunda yako. Nyora pamusoro pezviitiko zvinowanikwa munharaunda yakopane zvekugarisana nevamwe uye blog. Vafanani vangave vachigovera zvinyorwa zvichiita kuti vanhu vakawanda vazive bhizinesi rako / kambani. Unogonawo kuwedzera imwe nzvimbozviitiko zvekare kune webhusaiti yako. Iva nechokwadi chokuti inovandudzwa nguva dzose.
KuSEO yeKunharaunda kuti ibudirire, iite kuti ive yepamusoro yepamusoro pamajini ekutsvaga uyeipapo ita zvinyorwa zvitsva zveblogi rako uye zvinyorwa zvekugarisana nevamwe. Kuita nevatengi mumasangano ehupfumi kunotungamirira kumigwagwa yakakwirira kunzvimbo yakouye saka inzvimbo yakakwirira pane injini.